Southampton Oo Amaah Ku Qaadanaysa Messi-ga Cusub ee Odegaard
HomeSuuqaSouthampton Oo Amaah Ku Qaadanaysa Messi-ga Cusub ee Odegaard
Tababaraha kooxda kubadda cagta Southampton ee Ronald Koeman ayaa doonaya in uu kooxdiisa keeno laacibka khadka dhexe ee Odegaard oo lagu naanayso Messi-ga cusub eee adduunyada ku soo socda.
Odegaard oo u dhashay wadanka Norway, isla markaana ka tirsan kooxda heerka labaad ee Real Madrid ayaa waxa bishii January iska diiday in uu ku biiro Southampton isaga oo ka doortay Real Madrid, waxaase mar kale damaciisa soo cusbooneysiiyey tababare Koeman oo doonaya in uu amaah ku qaato laacibkan 16 jirka ah.
Ciyaartoygan hibada leh ayaa waxa kale ooh ore dalabyo ugu diray kooxo badan oo ay ka mid yihiin Manchester City, Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, Ajax iyo Barcelona hase yeeshee waxa uu ka doortay in uu ku biiro kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid.
Odegaard waxa uu kooxdiisa u dhaliyey hal gool, lix kulan oo uu u ciyaaray Real Madrid Castilla tan iyo markii uu ku biiray bishii January.
Sidaas oo ay tahay, waxa uu dhamaystay hal ciyaar oo kaliya, inta kalena waxa uu ku soo gelayay beddel ama ku baxayay.
Waxa uu si aad ah uga dhex muuqdaa tababarka kooxda waaweyn ee Real Madrid, isaga oo la tababarta Cristiano Ronaldo, Bale iyo xiddigaha kale ee ku sugan naadigaas, waxaana soo baxday in aanu dhibaato kala kulmi doonin haddii lagu daro kooxda koowaad.
Odegaard oo ay warbaahintu weydiisay sababtii uu ugu biiray Real Madrid ayaa ku sheegay in ay tahay meesha ugu habboon ee uu ku horumarin karo naftiisa iyo xirfaddiisaba, waxaanu yidhi: “Maxay ahayd sababta aan ugu biiray Real Madrid? Sababtu waa in ay tahay meesha ugu wanaagsan ee aan ku horumarin karayo naftayda. Waxa aan dareemay in ay tahay dookha koowaad, jidka aan ugu wanaagsan ee aan naftayda ku horumarinayo ciyaar ahaan iyo nolol ahaanba. Sidaa daraadeed, suurtogalkii ugu wanaagsanaa ayay ii tahay.
“Si cajiib ah ayay ii daryeelaan, waxaanan dareemay in aan gurigyagii joogo.” Sidaas ayuu yidhi Odegaard.
Laacibkan lagu naanayso (The New Messi), waxa kale oo uu tilmaamay in aanu rumaysan karaynin in ay diyaar u tahay kooxdii ugu wanaagsanayd adduunka oo uu u ciyaarayo, isla markaana ay sharaf weyn u tahay.
Isu-duwaha Ciyaaraha Gobolka Sool Oo Siilaanyo Iyo Muuse Biixi Farriin U Diray